Puntland oo sheegtay inay qabteen labo ruux oo xanuunka Aids-ka ku faafinayay Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 31 December 2016
By jowhar.com—Maamulka Puntland ayaa sheegay inay qabteen labo ruux oo xanuunka HIV Aids ku faafinayay deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Garowe ee xarunta Puntland.
Agaasimaha la dagaalanka xanuunka Aids-ka Dr C/raxmaan Saciid Dhagaweyne, ayaa warbaahinta u sheegay inay qabteen labo ruux oo kala ahaa haweeney iyo ruux rag ah oo xanuunka faafinayay, si ku talo gal ah.
Hay’adaha amaanka ayuu sheegay in labadaas ruux kasoo qabteen magaalada Garowe, wuxuuna sheegay in labadooda la ogaaday inay xanuunka qabaan kadib baaritaan lagu sameeyay.
Dr C/raxmaan Dhagaweyne, ayaa sheegay in labada ruux la horgeyn doono cadaalada lana marsiin doono cadaalada, isagoo ugu baaqay hay’adaha amaanka inay ka shaqeeyaan sidii dadkaasi bulshada looga dhex qaban lahaa.
Agaasimaha ayaa ugu baaqay dhalinyarada ku nool deegaanada Puntland ee doonaya inay is guursadaan inay marka hore baaritaan guud ismarsiiyaan si xanuunka looga feejignaado.
“Dadku aanu hayno waxaa kamid ah qof dumar oo aan Puntland u dhalan, taasoo qaad siiyay ilaa saddex rag oo ay guursatay”ayuu yiri agaasimaha.
Doorashada Xubnaha Aqalka Hoose Ee Gobolada Waqooyi Oo Maanta Dib Ugu Bilaabanaysa Muqdisho